Isa Android 7.0 Nougat ROM pa Galaxy Core 2 G355H. Yakatangwa munaJune 2014, Samsung Galaxy Core 2 SM-G355H yakakonzera zvakanyanya kuvashandisi veAroid nezviratidzo zvayo nyore uye zvinhu zvakanaka. Mamwe maziso ayo anobata maziso anosanganisira 4.5 masendimita eTFT screen ne 480 x 800 pixels yekugadziriswa, yakashandiswa ne 1.2 GHz Quad-core processor iyo inonzi 4 GB yekuchengetedza mukati uye 768 MB ye RAM. Chero bedzi makamera ane hanya yaive ne 5 megapixel yekambani kamera uye 0.3 megapixel yepamberi kamera ye selfies. Kunyange zvazvo mahwendefa aya asina kukosha mumusika nhasi, kunyange zvakadaro iyi smartphone yakapa makwikwi akaoma kwazvo kune vadzivisi varo kare kare.
Samsung Galaxy Core 2 yakatanga ne Android 4.4.2 KitKat yokushanda system. Asi nemhaka ye hardware yayo isinganzwisisiki, Samsung haina kumbobhurwa chero humwe hurumende huchagadziriswa mushure me Android KitKat iyo yakajeka yakaodza mwoyo vazhinji vashandisi. Iyi ndiyo apo vashanduri vezvechitatu vakatanga kushanda uye vachivandudza zvimwe zvakanakira uye zvinoshamisa tsika dzeROM zvakabva pane zvinyorwa zvekare zveAroid. Nguva yekupedzisira yatakasvika ne Android 5.0 Lollipop uye Android 6.0.1 Marshmallow OS iyo yakave nemhinduro huru kubva kwamuri varume. Tichifunga izvi, isu tiri kuunza iyo yakashambadzira Android version ie ie Android 7.0 Nougat tsika yakarongwa ROM kunyanya ye Samsung Galaxy Core 2 SM-G355H smartphone.
Muchirongwa ichi tichave tichikurukurirana zvishoma nezvishoma nhanho nzira yekuvandudza Samsung Galaxy Core 2 kune inodiwa Android 7.0 Nougat based custom ROM. Cherechedza kuti iyi haisi yepamutemo firmware inobva kuSamsina asi chechitatu unofficial tsika ROM. Kune mikana yokuti iwe unogona kuona vashoma mabhugi kana nyaya mushure mekutsvaira iyi firmware. Asi usanetseka nehuwandu hwezvinodiwa hutsva iyo dzose mishonga uye nyaya dzichadzimwa. Saka, kana iwe uchida kuona zviitiko zvinoshamisa zve Android 7.0 Nougat pane yako Samsung Galaxy Core 2 SM-G355H zvino enda mberi kumharidzo yedu chaiyo yakapiwa pasi apa. ?
Iyi iyi unofficial Android 7.0 Nougat inotarisa ROM uye haisi iyo chaiyo inonzi firmware yakabva kuSamsam. Saka fungidzira iwe pachako pangozi. Inonyatsorudzirwa kuti ishandise imwe neimwe nhanho zvakarurama. Handizvo paDroidThunder.com kana vadziri veROM iyi vachabatwa nemhosva yekukanganisa kupi kwakakonzerwa neGalaxy Core 2 yako nekureva mutungamiri uyu.
Iyi Android 7.0 Nougat ROM inoenderana chete Samsung Galaxy Core 2 ine nhamba yemuenzaniso SM-G355H. Kudonha iyi ROM pane imwe nzira kana zvimwe zvinogona kuitika mumigumisiro isingadiwi. Saka chengetedza nhamba yako yefaira kubva pane Menyu-> Zvirongwa-> Nezve Runhare tisati taenda mberi.
Chengeta yako Galaxy Core 2 zvishoma kusvika ku 60%. Izvi zvakakosha sekushayikwa kwesimba rebheteri kunogona kukanganisa kupenya kwechiedza.
Tora kuchengetedza kwemafoni ako ose data uye zvirongwa zvinosanganisira vanofambidzana, mapurogiramu akaiswa, mharidzo, magwaro ekufonera, manotsi nezvimwewo zvisati zvaenda mberi. Izvi zvinofanira kufanana nezvose zvinodzingwa muchitsauko chekupedzisira chekugadzirisa uku.
Backup EFS dhairekitori irimo mune yako dhairekitori. Iyi folda inonzwisisika ine yako ese mafoni mafoni ruzivo rwakadai seIIMI, zvishandiso zvisina waya MAC kero, chigadzirwa kodhi, uye zvimwe zvakawanda. Kana nekukanganisa iyo data irimo inopukutwa, zvino izvi zvichaita kuti foni yako isashande zvachose & haichazozivikanwe nemutakuri wako. Regedzera chinyorwa chedu kuchengetedza uye kudzoreredza EFS / IMEI dhata:
Nzira yekuchengetedza uye kudzorera EFS / IMEI pane Android Phones.
Iva nechokwadi chekuti mafambisi e-Mobile chaiwo akaiswa paPC yako. Iwe unogona kuaisa kuburikidza nekuisa Samsung Kies kana kuisa manheru kubva pahungano hwakapiwa pasi apa:
Download yakapfuura Samsung USB Dhirairi.
Iva nechokwadi chokuti Galaxy Core 2 yakadzika midzi.
Uyewo tsika yekudzidzira seClockworkmod (CWM) inofanira kuiswa pamberi pokuisa iyi ROM. Tarisa nhungamiro yedu nhanho chekuita kuti ungadzika sei nekuisa CWM kupora paGalaxy Core 2 G355H:
Nzira ye Root kuisa CWM kupora paGalaxy Core 2.
Iva nechokwadi chokuti iwe wakaita kuti USB isagadzirise mode pafoni yako. Kana zvisina kudaro, ita saizvozvo nokutevera nzira Menyu-> Zvirongwa-> Ongororo dzekuvandudza -> USB debugging. Kana iwe usingakwanise kuona Chinobatsiro shanduro enda enda Zvirongwa-> Nezvefoni uye tapota 7 nguva pane Vaka nhamba. Izvi zvichaita kuti Vashanduri vashandise vauye muMenyu yeMagadzirirwo.
Ngatitii tipfuurire padzidzo yedu chaiyo yekuisa Android 7.0 Nougat ROM paGalaxy Core 2 smartphone.
Nzira yekuisa Android 7.0 Nougat ROM paGalaxy Core 2:
Dhairai Deodexer.zip yeGalaxy Core 2 SM-G355H.
Tora Android 7.0 Nougat ROM ye Samsung Galaxy Core 2 SM-G355H.
Nhanho 1: Chengeta zvose zviripakiti mafaira (.zip) mune imwe faira pane PC yako. Usatora mahwendefa aya aya.
Nhanho 2: Iye zvino uchishandisa micro USB kabha ubatane neGalaxy Core 2 kune PC yako. Tumira zvose mafaira efoni pafoni yako mukati memori. Zvadaro usabvisa zvakachengeteka foni yako kubva kuPC.
Cherechedza: Kana iwe usina PC, unogona kutora zvakananga mafaira efoni pafoni yako.
Nhanho 3: Zvino bvisa yako Galaxy Core 2 zvizere kusvikira yadedera. Iwe unofanirwa kubaya foni yako kuita tsika yekudzosa modhi izvozvi. Nekudaro, pinda & bata Volume up + Home button (bhokisi riri pakati) + Bhatani reMasimba panguva imwe chete kusvikira foni yako inopinda tsika yakagadzirisa mode.
Cherechedza: Kubata hakuzoshandisi muCWM yekutsvaga mode (kunze kwekuti iwe waisa kugadzirisa kugadzirisa). Saka shandisa Volume keys nokuda kwokufamba uye pasi uye kushandisa Bhokisi rekumba pakusarudza.
Sezvo iwe paunopinda iko kuCWM kupora, zvinokurudzirwa zvakanyanya kutanga tora backup yakazara yeROM yako yazvino yauri kushandisa. Iyi backup inonzi saNandroid backup uye ndiyo backup yemafoni ako ese anoshanda system & inogara ichibatsira panguva yekundikana uchipenya maitiro kana panguva chero dambudziko neROM. Nenzira iyi unogona kudzoreredza yako yapfuura yakachengetedzwa ROM.
Rondedzera zvinyorwa zvedu zvinyorwa zvekutora Nandroid kuchengetedza:
Nzira yekutora Nandroid Backup yeipi Android Phone neZ8 nzira dzakawanda.
Nhanho 4: Zvekutora yakakwana nandroid backup, shandisa Vhoriyamu makiyi uye enda kune iyo 'backup & dzosera' sarudzo pane yekudzosa modhiyo pachayo uye pane inotevera skrini sarudza 'backup' sarudzo uchishandisa Kumba bhatani. Izvi zvinogadzira yakakwana nandroid backup. Refer screenshots.
Step 5: Iyezvino unofanirwa kuvhara deta uye kuvhara zvikamu kubva kunefoni yako mukati memusoro. Nokuita zvakafanana, enda kune 'kusula data / factory reset' sarudzo uchishandisa vhizha yevheji. Sarudza iyo uchishandisa Bhokisi reKu. Pamuchina wekuona screen Ehe chisarudzo chekutanga kushandura. Saizvozvowo famba kune 'kuchenesa cache chikamu' sarudzo uye bvisa ma caches aripo.
Cherechedza: Iyi nhanho ichabvisa data yose kubva kune foni yako mukati memusoro kuitira kubhadhara zvakakwana kwezvose zvinofanira kuitwa musati washandisa danho iri.
Step 6: Dzokera kumutambo mukuru uye sarudza iyo enderera chisarudzo. Pachirongwa chinotevera sarudza Reboot Recovery kuita.
Mirira kusvikira foni yako ichitsvaira zvakare kuCWM kupora.
Step 7: Kushandisa Vheji dzeMavhunoenderera kuenda ku'kuisa zip kubva SD card 'sarudzo. Sarudza iyo uchishandisa Bhokisi reKu. Zvadaro pane svondo rinotevera sarudza 'sarudza zip kubva SD card' sarudzo. Izvi zvichakuratidza iwe wese mafaira aripo pafoni yako. Saka tongopinda kuDeodex_G355HXXU0AOB1 zip file yawakanyora kare uye sarudza iyo uchishandisa Bhokisi reKumusha. Pachirongwa chinotevera sarudza 'Hongu' sarudzo kuti utange matanho.
Step 8: Mushure mekugadzirisa kwapera kwekubudirira, dzokera ku menu huru uye shandisa Nougat ROM .zip file nenzira imwecheteyo sezvawakamisa Deodex .zip file.
Step 9: Iye zvino chengetedza data uye cache zvikamu sezvawakaita muChitatu 5.
Cherechedza: Iyi nhanho inobatsira mukugadzirisa nyaya dzebhuku rechikwata.
Step 10: Zvose zvinopedzisa pano. Ingotangazve yako Galaxy Core 2 G355H nokusarudza 'reboot system iye zvino' sarudzo kubva pakudzorera mode. Cherechedza kuti boot yekutanga inotora nguva yakawanda kutanga pane zvisizvo. Asi usanetseka mushure mezvikwata zvishoma zvichange zvakasikwa.
Kana iwe usingagutsikane neROM uye unoda kuisa sarudzo yeSIM firmware zvino tumira mazano edu:
Nzira yekugadzirisa sei Galaxy Core 2 SM-G355H kune firmware Android 4.4.2 XXU0ANL6 firmware.
Tsvaga mutungamiri wedu kuisa Android 5.0.2 Lollipop paGalaxy Core 2 SM-G355H:
Nzira yekuisa sei Android 5.0.2 Lollipop tsika yeROM paGalaxy Core 2 SM-G355H.
Gotcha! Iyo yose itsva Android 7.0 Nougat ROM yakanyatsogadzirirwa pane yako Samsung Galaxy Core 2 SM-G355H smartphone. Enda ku Menyu-> Zvirongwa-> Nezvefoni uye kusimbisa zvakafanana. Farira zvose zvekupedzisira Android 7.0 Nougat zvinosanganisira iyi ROM. Uyewo musakanganwa kugovera maonero enyu uye ruzivo mushure mekuishandisa.
Sezvaunowanzoita kana ukasangana nenhamo chero ipi zvayo uchifamba nenzira iyi iwe undiudze ini uchishandisa chikamu chemashoko. Zvichava zvakanaka kukubatsira iwe varume. Kusvikira panguva iyo Ramba Uchinyemwerera uye Rugare! ✌
Isa Android 7.1.1 Nougat based Resurrection Remix ROM pane OnePlus 3
Isa Android 7.1.1 Nougat Lineage OS 14.1 ROM pane Galaxy A5
Isa Android 7.1 Nougat CM 14.1 ROM pane OnePlus 3
Filed Under: cara ganti tsika rom samsung galaizi 2